Top-news: Shirqool mucaaradka ka dhan ah oo fahad yasiin maleegayo..? | Garqaad News Agency
Top-news: Shirqool mucaaradka ka dhan ah oo fahad yasiin maleegayo..?
Shalay gudaha madaxtooyada somalia waxaa lagu qabtay 3nin oo hubeysan islamarkaaana katirsan kooxda shabab waxaana nimankan la ogaaday iney usocdeen xafiiska agaasime fahad yasiin oo mardanbe la ogaaday inuu iyaga balamiyay.
Yaa u fududeeyay iney soo galaan
Sida uu xaqiijiyay sargaal ilaalada villa somalia katirsan Xoghayaha agaasimaha madaxtoyada cabdirisaq caato ayaaa u fududeeya ragaan iney gudaha usoo galaan villa somalia iyagoo waliba hubeysan si ay toos ugu gudbaan xafiiska agaasime fahad yasiin oo isagu ku balamyay iney xafiiskiisa ugu yimaadaan iyagoo iska dhigaya shacab caadiya .
Ciidanka milatariga somaalia gaar ahaan qeybta ilaalada madaxtoyada ayaaa qabtay raggan waxaana su aalo dhowr ah oo la weydiiyay kadib ay sheegeen halkii ay usocdeen iyadoo markii danbe uu ku soo baxay fahad yasiin sheekada kadibna uu amray in lasii daayo 3da nin maadaama uu isagu ballamiyay sida lasoo wariyay.
Maxaytahay sababta uu fahad shabab ula kulmayo
Waxaa soo baxaya warar kala gadisan oo la xariira qorshaha fahad yasiin iyadoo ayjirto shirqoolo ka dhan ah siyaasiyiinta mucaaradka waxaana la aaminsanyahay in kulankii shalay uu ahaa fadhi looga tashanayay sidii shabab u weerari lahaayeen siyaasiyiinta mucaaradka kadibna dilkooda iyagu u sheegan lahaayeeen
Inkastoo ilaa hada aan la xaqiijin karin qorshahan hadana waxaa jira tuhun weyn oo ay qabaan mucaaradka.
Fahad yasiin oo lagu eedeeyo inuu xiriir dadban la leeyahay kooxda shabab ayaa wado qorshe uu mucaradka ku soo afjarayo kadib weerarkii fashilmay ee 17december lagu qaaday hoyga xisbiga wadajir.